Tag: infographic imewe | Martech Zone
Tag: infographic imewe
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị abụrụla ezigbo ihe enyemaka maka ndị na - agụ akwụkwọ iji chọta ma mụta site na infographics. Infographics bụ, otu n’ime ngwa ọrụ kachasị mma nke azụmaahịa ugbu a n’ihi na ha nwere ọtụtụ uru: A na - ekekọrịta ha n’ụzọ dị mfe, na - eme nke kachasị mma nke mgbasa ozi mmekọrịta - ịkekọrịta ọdịnaya gị ma gụọ na netwọkụ dị mkpa. A na-ebipụta ha ngwa ngwa, na-eme ihe kachasị mma nke nyocha ahịhịa - na-emepụta ọgaranya, backlinks dị mkpa nke na-eme ka ogo gị dị elu. Ha dị mfe
Sunday, October 25, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Agencylọ ọrụ anyị ewepụtala ihe karịrị 100 infographics yana, ugbu a, atụmatụ dị ike nke na-aga n'ihu na-aga nke ọma maka ndị ahịa ọ bụla anyị mebere ha. Anyị na-eme ha maka ọtụtụ ụlọ ọrụ yana ịgbatị onyinye ha nye ndị ahịa ha. Ulo oru a na-ebiputa #infographics nwere 12% onu ahia kariri. Dika ihe omumu nke Graphs.net Infographics nwere uru ndi kariri otutu uzo nke ihe omuma: Cognition - ma oburu na emeputara ma me ya nke oma,
The 2014 XNUMX CMO dị oke egwu na Social Landscape
Nyaahụ, enwetara m akwụkwọ a ma na-achọ ịpị mbipụta mgbe m kụrụ biya biya na laptọọpụ m. Enwere m olileanya na ọ bụghị karma na-abịa agba m butt. Laptọọpụ ahụ anwụghị, mana n'ụzọ ụfọdụ, akwụkwọ ozi post na-efu M na-ede ihe a na post na-esi ísì ụtọ nke biya na ndabere iji chetara m ka m na-eche ụra m. Nke a bụ ihe ahụ, echere m na nke a bụ ihe egwu egwu. Anya, ọ kọrọ